लेकका हामी केटाकेटी - कोपिला - कान्तिपुर समाचार
माघ १३, २०७५ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — तेम्बाथान सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सबैभन्दा विकट गाउँमा पर्छ ।
यो ठाउँ पुग्न सदरमुकाम चौताराबाट दुई दिन लाग्छ । जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्ने तेम्बाथानमा अहिले निकै चिसो छ । नजिकै हिमाल देखिन्छन् । कुनै वर्ष हिउँ पर्छ । कुनै वर्ष पर्दैन । बिहान उठ्दा पानी जमेर हिउँ बनेको हुन्छ । गाउँमा अधिकांशले चौंरी पालेका छन् । चौंरीबाट घ्यू र छुर्पी बनाएर बिक्री गरिन्छ । बालबालिकाहरू कतै चौंरीसँग रमाईरहेका त कतै गोठालो हिँडिरहेका भेटिन्छन् ।
चिसोले गर्दा सबैका गाला राता देखिन्छन् । गाउँमा एउटा मात्र विद्यालय छ । त्यो पनि कक्षा ५ सम्म मात्र पढाइ हुने । ८ सम्म पढ्न जान ५ घण्टा हिँड्नुपर्छ । मावि पढ्न जान त एक दिन पूरै हिँड्नुपर्छ । धेरै हिँड्नुपर्ने भएकाले ५ पढेर छाड्नेहरू धेरै छन् । गाउँको विद्यालय भिरालो ठाउँमा छ । लड्ने खतरा बढी छ । अहिले चिसो भएकाले अँगेनोको छेउमा बस्न साना बालबालिकाबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्छ ।
बाटो हिँड्दा ससाना साथीहरू दाउराको भारी बोकेर आमाबुवालाई सघाइहेका भेटिन्छन् । कोही चिसोले गर्दा हात मुख नै नधोई विद्यालय जाँदै गरेका भेटिन्छन् । गाउँको तेम्बाथान आधारभूत विद्यालयमा म्याट ओछयाएर पढ्न बस्नुपर्छ । भूकम्पले भत्किएको विद्यालय अहिले बनाइँदै छ । त्यसैले पढाइ टहरोमा हुन्छ ।
आफ्नो भाषा राम्रो बोल्न जान्दछन् । आफ्नै भाषामा गीत गाउँछन् । आमाबुवा मेलापातमा जाँदा प्राय: उनीहरू पनि साथै जान्छन् । ‘सानै उमेरमा ठूलो काम गर्ने बालबालिका गाउँमा धेरै छन्,’ तेम्बाथान आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज शर्मा भन्छन्, ‘त्यही भएर अभिभावक छोराछोरीलाई घर जिम्मा लगाएर सहर पुगी फर्कन्छन् ।’ विकटमा भएकाले दु:ख धेरै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छैन । साना बालबालिका बिरामी परे धामीझाँक्रीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य चौकी जान एक दिनभन्दा बढी लाग्छ । साना नानीहरूले पोलियो थोपा खान पाएका छैनन् । ९ महिनासम्म लगाउनुपर्ने सुई लाउन पाएका छैनन् । थोरै अभिभावकले मात्र भीरको बाटो हुँदै खोप लगाउन स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँछन् । ‘हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छैन, उपचार गर्न पाइँदैन,’ कक्षा ५ मा अध्ययनतर छिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई डाक्टर पढेर गाउँमा हस्पिटल खोल्न मन छ । बिरामीको उपचार गर्न मन छ ।’
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ १०:१९
माघ ६, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — हामी दिनहुँ कैयौं व्यक्तिलाई कैयौं प्रश्न सोध्ने गर्छौं । आफूलाई थाहा नभएको कुरा थाहा पाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका प्रश्न सोध्नु हो । कक्षामा नबुझेको विषय शिक्षकलाई सोधिन्छ । घरमा नजानको कुरा अभिभावकलाई । हिँड्दा हिँड्दै अल्मलियो भने नचिनको मानिसलाई पनि बाटो सोधिन्छ ।
प्रश्न सोध्नुलाई हामी खासै ठूलो कुरा ठान्दैनौं । तर मनोवैज्ञानिकहरू यसको ठूलो महत्त्व हुने ठान्छन् । उनीहरू भन्छन्– हामीले कस्तो प्रश्न सोध्छौं भन्ने कुराले हाम्रो स्वभाव, चालचलन र आनीबानी मात्र नभई सिंगो व्यक्तित्व कसरी विकास भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ ।
हामीले कस्तो प्रश्न सोध्छौं भन्ने कुराले हाम्रो निर्णय क्षमता कस्तो छ भन्ने पनि दर्साउँछ । कसैले केही प्रश्न सोध्नेबित्तिकै उसको ज्ञानको स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । कतिपयको प्रश्नबाट उसको नियत पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसैले त कैयौं अवसरहरूमा उत्तर दिने व्यक्तिले प्रश्नकर्तालाई हौस्याउँदै भन्छन्– धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो ।
गर्ने कि नगर्ने?
होमवर्क गर्ने कि खेल्न जाने ? कुनै काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने पत्तो लगाउन हामी प्रश्न सोध्छौं । कतै हिँड्ने कि घरमै बसिरहने ? कसैलाई फोन गर्ने कि कसैको फोन पर्खने ? यी सबको टुंगो हामी प्रश्न सोधेर नै गर्छौं । यस्तो प्रश्न अरू कसैलाई सोधेनौं भने पनि आफ्नै मनलाई सोधिरहेका हुन्छौं । कक्षाकोठामा चुपचाप बसिरहनुभन्दा प्रश्न सोध्नु राम्रो । लेख्दै नलेखी बस्नुभन्दा केही न केही लेखेकै राम्रो । लेखपढ गर्न मन नलागे चित्र बनाउनु वा कविता लेख्नु जाती । एक्लै हुँदा केही काम भएन भने गीत गुन्गुनाएको राम्रो । किनभने सक्रिय रहने बानीले सधंै हाम्रो रचनात्मकता बढाउँछ ।
मान्ने कि नमान्ने ?
कसैले केही अह्रायो भने हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ– मान्ने कि नमान्ने ? कतिपय काम मान्नुपर्ने खालका हुन्छन् तर गर्न अल्छी लागिरहेको हुन्छ । कति काम गरूँ गरूँ लाग्छन् तर गर्न नहुने खालका हुन्छन् । सकारात्मक काम हो भने मान्नुपर्छ । नकारात्मक विषय हो भने त्यसबाट पर सरेकै राम्रो । तर कुनै पनि काम सकारात्मक हो कि नकारात्मक भन्ने छुट्याउन पनि प्रश्नै सोध्नुपर्छ । त्यस्तो प्रश्न सबैभन्दा पहिले आफैंलाई सोध्ने । उत्तर पाइएनजस्तो लाग्यो भने अभिभावक, शिक्षक वा आफूलाई विश्वास लाग्ने व्यक्तिलाई सोध्नुपर्छ ।
सोच्ने कि नसोच्ने ?
हाम्रो दिमागले तत्कालका कामकुरामा बढी ध्यान दिन्छ । पढ्नभन्दा खेल्न सजिलो मान्छ । दु:ख गरेर कमाउनभन्दा सजिलै चाँडै धनी हुने उपाय खोज्छ । कुनै पनि कुरामा तत्काल सन्तुष्टि खोज्छ । तर लक्ष्य निर्धारण गरी उपलब्धि हात पार्न तत्कालको खुसी छाड्न पनि सक्नुपर्छ । तत्कालको खर्च रमाइलो हो तर बचत गर्नु भनेको भविष्यको बाटो बनाउनु हो । आजको दिन बिगार्ने कि सपार्ने, हाम्रै हातमा छ । जो खुसी हुन्छ र सकारात्मक सोच्छ, उसको आजको दिन सफल बन्छ । जो दिक्क मान्छ र नकारात्मक सोच्छ उसको दिन खराब बन्छ ।
जोखिम लिने कि नलिने ?
कुनै पनि खेल जित्नकै लागि खेलिन्छन् हार्न होइन । तर पक्का जितका लागि हाम्रो मिहिनत र लगानी अत्यधिक हुनुपर्छ । जो सधंै सुरक्षित मात्रै रहन खोज्छ, उसले जोखिम नरुचाउन सक्छ । उसको मनमा प्रश्न आउन सक्छ– हारियो भने ? मासियो भने ? जोखिम नमोल्ने व्यक्तिले सफलता पाउने सम्भावना पनि कमै हुन्छ । तर यसको अर्थ जस्तोसुकै खतरामा पनि जोखिम मोल्नुपर्छ भन्ने होइन । ती चुनौती मात्रै सामना गर्नु राम्रो हो, जुन आफ्नो क्षमताले पार लगाउन सकिन्छ ।
आफूलाई प्राथमिकता दिने कि अरुलाई ?
हामी आफूले आफैंलाई महत्त्व दिँदैनौँ भने अरू कसले दिन्छ ? तर सबैले आफैंलाई मात्र महत्त्व दिने हो भने अरूले कसरी महत्त्व दिन्छन् ? हरेकको पहिलो प्राथमिकता आफैं हो । तर कतिपय अवस्थामा अन्य व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफूभन्दा कमजोर र अभावमा रहेको व्यक्तिलाई गरिने सहयोगले आफूमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्छ । यसको बदला कुनै व्यक्ति ठूलो समस्यामा परेको थाहा हुँदाहुँदै पनि उसलाई मद्दत गरिएन भने आफैं दु:खी होइन्छ ।
(साइकोलोजी टुडेमा प्रकाशित आलेखमा आधारित)
प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १०:४१